Oprah Winfrey sy Prince Harry dia mitondra fahasalamana ara-tsaina amin'ny Apple TV + amin'ny faran'ny volana Mey | Avy amin'ny mac aho
Nambara tamin'ny 2019 tamin'ny alàlan'ny Instagram ary taorian'izay fahatarana famokarana amin'ny farany ho hita amin'ny Apple TV + amin'ny Mey. Ny famotsorana dia voamarina nandritra ny tafatafa niarahana tamin'i Oprah tao amin'ny The Drew Barrymore Show. Tsy ny famokarana ihany no nahemotra noho ny areti-mandringana, saingy marina fa ny fananana ny premiere akaiky dia maro ny zavatra tonga ao an-tsaina, indrindra ny zava-misy ankehitriny an'ny Príncipe izay farafaharatsiny azontsika faritana hoe tena haino aman-jery.
Tamin'ny volana aprily 2019, ny fiaraha-miasa amin'ny Prince Harry miaraka amin'i Oprah sy Apple TV + dia nambara fa hamorona andian-tantara momba azy ny fanilikilihana ny olana ara-pahasalamana. Ny fanambarana an'ity andiany ity dia nataon'ny printsy tamin'ny alàlan'ny kaonty Instagram azy ireo, andian-dahatsoratra fanadihadiana izay hiresaka momba ny olan'ny fahasalamana ara-tsaina eran'izao tontolo izao, tsy ao amin'ny Fanjakana Mitambatra ihany. Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny The Drew Barrymore Show niaraka tamin'i Oprah, dia nanamafy izy fa amin'ny faran'ny volana Mey ny premiere.
Ny andian-dahatsary fanadihadiana be dia be dia hifantoka amin'ny aretin-tsaina sy ny fahasalamana ara-tsaina. Hiezaka ny hanome aingam-panahy ny mpijery mba hiresaka marina momba ireo fanamby atrehantsika tsirairay avy. Ambonin'ny zavatra rehetra, ny fomba fampitaovana ny tenantsika amin'ireo fitaovana tsy ho tafavoaka velona tsotra izao, fa miroborobo.
Toa tsara ary ny premiere an'ny andiany dia mitranga amin'ny fotoana tena mahasoa. Ny fiheverana fa ny areti-mandringana dia tsy vitan'ny hoe niteraka krizy ara-pahasalamana sy ara-toekarena, fa niteraka krizy ara-tsosialy. Nihena ny fifandraisana teo amin'ny olona ary izany dia miteraka fitomboan'ny sain'ny olona matihanina amin'ny fahasalamana ara-tsaina.
Tsy maintsy miandry isika amin'ny faran'ny volana Mey hijerena ny fandalovan'ity andiany ity miaraka amin'ny printsy haino aman-jery sy ilay Oprah marobe
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Oprah Winfrey sy Prince Harry dia mitondra fahasalamana ara-tsaina amin'ny Apple TV + amin'ny faran'ny volana Mey